डा. केसीले कांग्रेसको एजेण्डा बोकेर हिडे : सांसद भट्टराई « News24 : Premium News Channel
डा. केसीले कांग्रेसको एजेण्डा बोकेर हिडे : सांसद भट्टराई
इलाम – नेकपाका युवा नेता एवं सांसद योगेश भट्टराईले डा. केसी कांग्रेसको एजेण्डा बोकेर हिडेको आरोप लगाएका छन् । साथै केसी आफै अनसन बसेको र आफै तोड्ने समेत बताएका छन् । बुधबार इलाम पुगेका सांसद भट्टराईले उनी कम्युनिष्ट फोबिया भएर अनसन बस्न ईलाम पुगेको जिकिर गरेका छन् । इलाममा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले अनसनरत डा। गोविन्द केसीको आलोचना गरेका छन् ।
चिकित्सा विधेयक राम्रोसँग नबुझी डा गोविन्द केसी इलाममा अनसन बसेका छन् उनले भने । डा. केसीका मागहरु विधेकमा नै पुरा भएको र उनको अनसनको कुनै औचित्य नरहेको समेत दाबी गरेका छन् । संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्यसमेत रहेका भट्टराईले आफ्ना माग पुरा भएकोमा खुसी भएर बस्नु पर्ने समयमा इलाममा गएर अनसन बस्नुको कुनै औचित्य नरहेको दाबी गरेका छन् ।
प्रेस चौतारी र प्रेस सेन्टरले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको चिकित्सा विधेयकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै नेता भट्टराईले डा। केसीले कांग्रेसको एजेण्डा बोकेको आरोप लगाएका हुन् । चुनावका बेला डा। केसी चारतारे झण्डा बोकेर भोट माग्न हिँडेकाले उनी तटस्थ नभएको पनि उनले जिकिर गरे ।